विहे गरेको दिनमै दुहलीले गरिन आ’त्मा’ह’त्या, आफन्त भन्छन यो ह’त्’या हो( भिडियो हेर्नुस) - Public 24Khabar
Home News विहे गरेको दिनमै दुहलीले गरिन आ’त्मा’ह’त्या, आफन्त भन्छन यो ह’त्’या हो( भिडियो...
विहे गरेको दिनमै दुहलीले गरिन आ’त्मा’ह’त्या, आफन्त भन्छन यो ह’त्’या हो( भिडियो हेर्नुस)
माया भन्नाले के बुझिन्छ ? के माया पाउन या माया गुमाएर नै मृ’त्यु रोज्न सक्ने आट मान्छेले कुन अवस्थामा सोच्ने गर्ने गर्छ ?
यस्ता प्रश्नको अकाट्य जवाफ त न आउला तर यहि माया प्रेमलाई सहि तरिकाले बुझ्न नसक्दा कतिपय परिवार चाहे त्यो विवाहित होस या अविवाहित असर गरेको देखिन्छ । यस्तै घ’ट्’ना अहिले बाहिर आएको छ । एकजाना प्रेमिकाले आफै बिहे गरेको केही दिन मै आ’त्’मा’ह’त्’या ग’रे’की छिन ।
उदयपुर बेलका नगरपालिकाको वार्ड नं. दुइ, करैया बस्ने मायावती चौधरीले केहिदिन अगाडि नजिकैको छोमेकी गाउँको आफ्नो प्रेमी सगँ भागेर बिबाह गरिन ।
तर बिहे गरेको केही दिनमै उनले आ’त्मा’ह’त्’या गरेको खबर मायावतिका परिवारले पायो र उनिहरु त्यहा गए । मृ’तकको अवस्था र शरीर हेर्दा आ’त्’मा’ह’त्’या होइन यो योजनाबद्ध ह’त्’या गरिएको हो भन्ने उनिहरु निष्कर्षमा पुगेका छन ।
घरबाट हटिया कपडा किन्न जान्छु भनी हिडेकी उनी बेलुकासम्म घर फर्किएकी थिइनन । उनको फोन पनि नलागे पछि दिदिको घरमा बसेको भन्ने सोचले त्यो दिन खोजी नगरेको मृ’तकका बाबुले बताए । तर पछि बिहे गरेको थाहा पाए पछि उनिहरु यतिकै बसे ।
त्यसको केही दिनमै आ’त्’मा’ह’त्’या खबर पाइ आफ्नो छोरिको मृत शरीर देख्दा उनिहरु अहिले शोकमा डुबेका छन । आफैले माया गरेर गएको केटासगँ बिहे गरेर गएपछी फेरि आफै आ’त्’मा’ह’त्’या कसरी गरेको हुन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न अहिके केटिपक्षको छ ।
केटि पक्षकि छिमेकी इन्दिरा लिम्बूका अनुसार ; केटिको शरीरमा कुनै निलडाम नभएको साथै झु’ण्डिएर आ’त्’मा’ह’त्’या गरे जस्तो घा’टिमा कुनै त्यस्तो डोरिको निसान पनि नभएको बताइन । मृत्युको खबर पाए लगत्तै घट्नास्थल पुगेका मृतकका दाजु आनन्द चौधरीका अनुसार मृ’तकको शरीर मा कुनै चोटपटक थिएन, झुण्डिएर आ’त्’मा’ह’त्’या गर्दा दिशा पिसाब गरेको हुनु पर्ने, हातका औलाहरु खुल्ला हुनु पर्ने हुन्छ तर त्यस्तो त्यहा केही थिएन । दिश पिसाब पनि थिएन, दुबै हात मुठ्ठी बनाएको अवस्था थियो ।
छिमेकि इन्दिरा लिम्बूका अनुसार उनिहरु एकअर्काबिच प्रेम थियो तर मायावतिको प्रेमीलाई भने प्रेमीकै सोल्टिनी नाता पर्ने केटिले पनि मन पराउथिन । साथै उक्त केटालाइ बिहेको लागि दवाब दिने गरेको पनि जानकारी गराइन । जब मायावती र उनका प्रेमीले बिवाह गरेर गए उनिहरु केही दिन आफन्तको बसेका थिए । बिहेगरेको थाहा पाएपछि मायावतीका श्रीमानको सोल्टिनी पर्नेले मान्छे लिएर आइ घर घेरा हालेर मायावतिका सासुससुरालाइ छोरा लिएर आइज नत्र तेरै घरमा आ’त्’मा’ह’त्’या गर्छु भन्दै धम्की दिएको पनि छिमेकी लिम्बूले जानकारी दिइन ।
उक्त कुरा थाहा पाएर मायावती र उनका श्रीमान घर आइ उनिहरुले `धार्मिक परम्परा अनुसा दुबै जना राजी खुशिले बिवाह बन्धनमा बाधिएको´ भन्ने कागज पनि गरेको पनि जानकारी लिम्बुले दिइन । मायावतीका श्रीमानले मायावती सगँ नै प्रेम गरेको तर उस्को सोल्टिनी पर्नेलाइ आफुले माया नगर्ने र मन पनि नपराउने भएकोले उस्ले दिने दवावका कारण मायावतीसगँ बिहे गरेको हो भन्ने प्रमाण कै लागि उक्त कागज बनाएको हुन सक्ने लिम्बूको बुझाइ छ ।
मृतक पक्षले भने त्यही सोल्टिनी पर्ने केटिले बारम्बार घर आएर दवाब दिएकै कारण आफ्नो छोरीको योजनाबद्ध तरिकाले ह’त्’या गरिएको भन्ने आरोप लगाएका छन । घ’ट्’ना ह’त्’या हो या आ’त्’मा’ह’त्’या हो त्यो भने एकिन हुन सकेकी छैन । मृ’त शरीर भने अहिले पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला आस्पतालमा राखिएको छ भने मायावतिका श्रीमानलाई प्रहरिले हिरासतमा लिएर सोधबुझ गरिरहेको छ । ( भिडियो हेर्नुस; )
Previous articleहरि उदासीका ४ ओटी श्रीमती ? साँइली श्रीमती छोराहरु बोकेर रुँदै मिडियामा, खुल्यो उदासीको कालो कर्तुत -भिडियो